[Wondershare] फ्लैश ड्राइव पुन:
तपाईंको सुरक्षित र पूरा फ्लैश ड्राइव डाटा रिकभरी
कसरी फ्लैश ड्राइव डेटा पुन: प्राप्त गर्न सिक्नुहोस् #WondershareGift! विन 32GB SanDisk फ्लैश ड्राइव गर्न फेसबुकमा यो पोस्ट साझेदारी गर्नुहोस्! - https://www.facebook.com/DataRecoveryTech/posts/1713022958722483
अब डाउनलोड अब डाउनलोड
व्यावसायिक र सुरक्षित फ्लैश ड्राइव पुन: उपकरण विन्डोज र म्याकका लागि
Wondershare फ्लैश ड्राइव डाटा रिकभरी फ्लैश ड्राइव देखि आफ्नो फोटो हराइरहेको, अडियो र भिडियो पुनर्स्थापना गर्न परम फाइल हो। यो तपाईं जस्तै मेटाउने, ढाँचा र अरूलाई रूपमा तपाईँको फाइलहरू गलत हुन सक्छ कि लगभग कुनै पनि डेटा हानि अवस्था समर्थन गर्दछ। यो सफ्टवेयर प्रयोग र बचत गर्न सजिलो छ कि ठूलो इन्टरफेस छ। यो पनि एक पूर्वावलोकन सुविधा भनेर पार गर्न तपाईँको फाइलहरू जाँच गर्न अनुमति दिन्छ छ। यो दुवै विन्डोज र म्याक मञ्चहरूमा प्रयोग गर्दछ।
कागजात डाक्टर / DOCX, XLS / XLSX, PPT / PPTX, PDF, CWK, HTML / htm, INDD, ईपीएस, आदि
फोटो JPG, झगडा / TIF, PNG, BMP, GIF PSD, CRW, CR2, NEF, ORF, raf, SR2, MRW, DCR, डब्लुएमएफनिर्यातफिल्टर, DNG, ERF, कच्चा, आदि
भिडियो AVI, MOV, MP4, M4v, 3GP, 3G2, WMV, ASF, FLV, SWF, mpg, RM / RMVB, आदि
अडियो AIF / AIFF, M4A, एमपी 3, अर्थोपाय अग्रिम, मध्य / मिडी, ogg, AAC, आदि
सन्देश र इमेल PST, DBX, EMLX, आदि
संग्रह जिप, RAR, SIT, आदि
कसरी यो काम गर्दछ:
1 को कम्प्यूटर गर्न फ्लैश ड्राइव जडान गर्नुहोस् र फाइल प्रकार चयन गर्नुहोस्
2 तपाईंले आफ्नो फाइलहरू नष्ट जहाँ फ्लैश ड्राइव स्मृति चयन
3 पूर्वावलोकन र तपाईंको फ्ल्यास ड्राइभ अथवा कुनै पनि स्थानमा हराएका फाइलहरू पुन: प्राप्त
के परिदृश्य तपाईं USB फ्लैश ड्राइव मा तपाईँको डेटा खो
• USB ड्राइभ को असुरक्षित हटाउने
तपाईं आफ्नो फ्लैश ड्राइव हटाउन गर्दा प्रयोगमा यसलाई तार्किक फाइल सिस्टम विफलता परिणाम गर्दा। सबैभन्दा मानिसहरू फ्लैश ड्राइव मा सामग्री विचार बिना असुरक्षित फ्लैश ड्राइव प्लग गर्छन। केही अवस्थामा फ्लैश ड्राइव तपाईं अनुचित कम्प्युटर आफ्नो फ्लैश ड्राइव हटाउन गर्दा क्षतिग्रस्त भएको छ।
• भाइरस आक्रमण
तपाईं भित्र आफ्नो फ्लैश ड्राइव र सामग्री मोल भने, त्यसपछि तपाईं आफ्नो उपकरणमा एन्टिभाइरस गरेर तपाईँको फाइलहरू रक्षा गर्नुपर्छ। यो भाइरस वा कुनै पनि सम्बन्धित मालवेयर गरेर फाइलहरू र भ्रष्टाचार को मेटाइ रोक्न हुनेछ। छैन पनि भाइरस छ कि कम्प्युटर आफ्नो उपकरण जडान गर्छन्।
डाटा हानि अर्को कारण फाइलहरू मेटाउने छ। फाइलहरू मेटाउने जानिजानि हुन सक्छ वा यो गल्ति हुन सक्छ। तपाईं एक कम्प्युटर वा ल्यापटप फाइल जडान यदि तपाईं फाइलहरू मेटाउँदै यसरी मेटाउने बटन क्लिक सक्छ। रीसायकल बिन फाइलहरू खाली वा थ्रैश पनि मेटिएको थियो तपाईँको ड्राइभ बाट डेटा मेटाउँछ।
• अनुचित ढाँचा र विभाजन
तपाईं कसरी ढाँचाबद्ध गर्ने कुनै विचार छ भने, तपाईं अनुचित ढाँचा प्रदर्शन सक्छ र तपाईं आफ्नो ड्राइभ ढाँचा रूपमा फाइल मेटाउन हुनेछ। तपाईं फाइलहरू मेटाउन र एक फिर्ता गरेको थियो भने यो तीतो छ।
कसरी डाटा हानि जोगिन फ्लैश ड्राइव मा
के डाटा हानि बारे ठूलो छ तपाईं कम वा निम्न गरेर भइरहेको यी अवस्थामा रोक्न सक्नुहुन्छ।
तपाईं ढाँचा वा आफ्नो USB ड्राइभ विभाजन प्रारम्भ गर्नु अघि, सधैं एक फिर्ता तपाईँको फाइलहरू गर्छन्। यो तपाईं ढाँचाबद्ध गर्न चाहनुहुन्छ जब, यो सधैं कुनै पनि प्रकोप आइपर्दा को मामला मा तपाईँको फाइलहरू जगेडा गर्न सुरक्षित छ बस छैन।
तपाईंको फ्लैश ड्राइव सुरक्षित
भाइरस प्रभावित भएको छ कि फ्लैश ड्राइव मा फाइलहरू भण्डारण छैन। त्यसैले फाइलहरू भ्रष्ट गरिनेछ तपाईं र यदि तपाईं आफ्नो भिडियो वा तस्बिरहरू हुनेछ। यसबाहेक आफ्नो फ्लैश ड्राइव भ्रष्ट छन् भन्ने फाइलहरू स्थानान्तरण छैन।
तपाईंको फ्लैश ड्राइव सुरक्षित भण्डारण
सुरक्षित राखेर आफ्नो फ्लैश ड्राइव सुरक्षित गर्नुहोस्। धूलो, गर्मी, चिसो र कुनै पनि तरल पदार्थ देखि बन्द राख्नुहोस्। यो तपाईंको फ्लैश गोता जीवन span वृद्धि हुनेछ र यो कार्य गर्नुपर्छ।
फ्ल्यास ड्राइभ ज्ञान आधार
फ्लैश ड्राइव अर्को एक कम्प्युटरबाट मिडिया फाइलहरू स्थानान्तरण गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ कि एक डिजिटल Medias भण्डारण छ। फ्लैश ड्राइव फाइलहरू पढ्न र लेख्न फ्लैश स्मृति प्रयोग महत्त्वपूर्ण भण्डारण यन्त्रहरू छन्। त्यहाँ यस्तो USB फ्लैश ड्राइव फरक फाइल प्रकार बजार मा उपलब्ध छन्। चमक ड्राइव को यस प्रकारको एक सार्वभौमिक सिरियल बस प्रयोग र फ्लैश भण्डारण गर्न र स्थानान्तरण डाटा ड्राइव। फ्लैश ड्राइव पोर्टेबल र प्रकाश हुन् र तिनीहरूले बिस्तारै फ्लपी डिस्क outshining र सीडी गरेको छन्। फ्लैश ड्राइव यस्तो 1GB, 2GB, 64 1TB पनि विभिन्न क्षमता छ।
कसरी फ्लैश ड्राइव ह्यान्डल गर्न सुझावहरूको
प्रयोगमा गर्दा फ्लैश ड्राइव हटाउन छैन
समय को लामो अवधिको लागि एक फ्लैश ड्राइव प्रयोग नगर्नुहोस्
सधैं फाइलहरू एक जगेडा गर्न
गुणस्तर फ्लैश ड्राइव को लागि जाने
एक बिग्रिएको फ्लैश ड्राइव देखि अत्यावश्यक फाइलहरू बचत
युएसबी पुन युएसबी फाइलहरू पुन: प्राप्त
Adata फ्लैश ड्राइव पुन:
शीर्ष 10 सुरक्षित फ्लैश ड्राइव
मर्मत USB फ्लैश ड्राइव
फ्लैश ड्राइव पहिचान समस्या समाधान
PNY attache पुन:
Lexar Jumpdrive पुन:
सिलिकन फ्लैश ड्राइव पुन: